देउवालाई प्रश्न ?
Monday, 10 Jul, 2017 6:35 PM
– प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले के अपराध गरेकी थिइन् ? उनीमाथि किन महाअभियोग लगाउनुभयो र फिर्ता लिनुभयो ?
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि एमाले र माओवादीले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । कार्कीको पक्षमा कांग्रेस उभिनुको कारण के थियो ?
– नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठलाई महानिरीक्षक बनाउने प्रावधान छ । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ, क्षमतावान, योग्य व्यक्तिलाई छाडेर किन कनिष्ठ डिआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुभयो ?
यी यस्ता प्रश्न हुन्, जुन प्रश्न सोध्नासाथ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उफ्रन्छन् । जनताको मनमा लागेका यी प्रश्नको उत्तर देउवासँग नभएरै होला, उनी प्रश्नसँग नै डराउने गरेका छन् । लोकतन्त्र र कानुनी राजको खिल्ली उडाउने यस्ता घटनाका पछाडि सिंगो नेपाली कांग्रेसको स्वार्थ जोडिएको छ वा देउवाको मात्रै स्वार्थ लुकेको छ ? जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थामा जनताले सोधेको प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्दछ । अन्यथा त्यसले जनतामा विद्रोह जन्माउँछ । २०५२ सालमा माओवादी जनविद्रोह जन्मिनुको एउटा कारण देउवा पनि हुन् । त्यतिबेला माओवादीले उठाएका मागप्रति देउवा गम्भीर भइदिएको भए, सायद १७ हजार नेपाली जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । देउवाको यस्तै कमजोरीका कारण माघ १९ गतेको घटना दोहोरियो ।
देउवाको यी र यस्तै व्यवहारका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई देशभरका बौद्धिक जनमतले दण्ड सजाय गरेका छन् । यदि देउवा आगामी संसदको निर्वाचनमा काठमाडौंबाट उम्मेदवार बन्ने हो भने काठमाडौंका जनताले उनको जमानत जफत गरिदिनेछन् । तर, के गर्नु डडेल्धुराका सोझा जनता सामु देउवा लाटा देशका गाडा तन्देरी भनेझै भएका छन् ।
प्रसंग साझा सवालको हो । नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेझै देउवाको पक्ष लिनेहरु अहिले साझा सवालविरुद्ध सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदैछन् । मिडिया भनेको माध्यम मात्रै हो । त्यसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा देउवाको व्यक्तिगत कुरा हो । एउटा नागरिकले आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा त्यसको उत्तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सभ्य तरिकाले दिएको भए देउवाको यति साह्रो बेइज्जती हुने थिएन । प्रश्नकर्ताले जे प्रश्न गरेका थिए, त्यसमा केही आग्रह पूर्वाग्रह पनि थिएन । सिंगापुर लिक्वानोले बनाए, महाथिरले मलेसिया बनाए, सी जीनपिङले चीन बनाउँदैछन्, मोदीले भारत बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो त सबैले देखेको बुझेको कुरा हो । हामीले हाम्रो देश कहिले बनाउँछौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नै गर्न नपाइने ? देउवाको लागि वाहवाही कमाउने मौका थियो, यो प्रश्न । तर, भिजनै नभएका चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा प्रश्नसँगै तर्सिए र प्रश्नकर्तालाई असभ्य भाषामा बढीनबोल भनेर धम्क्याए । देउवाको प्रस्तुतिले देउवाको होइन, सिंगो नेपाली जनताका शिर लाजले झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा ‘दिनको संकेत बिहानीले गर्छ’ भनेर यसै स्तम्भमार्फत् मैले सानो टिप्पणी गरेको थिएँ । नभन्दै देउवाले आफ्नो ताल देखाइहाले, त्यो पनि बीबीसीका साझा सवालजस्तो लोकप्रिय कार्यक्रममा । जे हुनु भैहाल्यो । देशका लागि केही गर्छु भन्ने अठोट देउवामा हुनुपर्छ । देशका लागि केही गरेर देखाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुनको लागि प्रधानमन्त्री हुने होइन, देशका लागि केही गर्ने प्रधानमन्त्री जनताले चाहेका हुन् । सायद देउवासँग प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताको आशय पनि त्यही नै थियो । यसमा कोही रिसाउनु पर्ने कारण छैन । किनभने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार जनतामा सुरक्षित छ ।